Ndị na-egbochi ire ọkụ nwere ike ibelata IQ, na-ebute oke arụ ọrụ n'ime ụmụaka - Echiche 2022
Ndị na-egbochi ire ọkụ nwere ike ibelata IQ, na-ebute oke arụ ọrụ n'ime ụmụaka
Ejikọtala ikpughe n'afọ ime ihe ndị a na-eji ihe na-egbochi ire ọkụ agwọta na ọgụgụ isi dị ala na ime ihe ike n'ime ụmụaka n'oge nwata.
Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs), otu klas nke ire ọkụ ejiri mee ihe ruo ọtụtụ iri afọ, nwere ike ịhụ n'ihe ndị nkịtị dị ka ihe nrịba ụmụaka, kapeeti, na ngwa eletrọnịkị.
"N'ihe ọmụmụ anụmanụ, PBDE nwere ike ịkpaghasị hormone thyroid ma mee ka hyperactivity na nsogbu mmụta," ka Aimin Chen, PhD, onye osote prọfesọ na Ngalaba Ahụike gburugburu ebe obibi na Mahadum Cincinnati College of Medicine kwuru. "Ọmụmụ ihe anyị na-agbakwụnye n'ọtụtụ ọmụmụ mmadụ ndị ọzọ iji gosi mkpa ọ dị ibelata ikpughe na PBDE na ụmụ nwanyị dị ime."
Ọmụmụ ihe a, nke emere na Cincinnati Children's Hospital Medical Center, tụrụ ọkwa PBDE n'ihe nlele ọbara ewepụtara n'aka ụmụ nwanyị dị ime 309. Ndị nchọpụta nyekwara ụmụ ndị inyom ahụ ule ọgụgụ isi na omume ruo mgbe ha dị afọ ise.
"Anyị hụrụ ikpughe nke nne na PBDE, otu ìgwè nke ndị na-ere ọkụ na-ekpo ọkụ na-ewepụkarị na ahịa US na 2004, jikọtara ya na mperi nke ụbụrụ ụmụaka na afọ 5 na hyperactivity na afọ 2-5," ka Dr. Chen kwuru.
Ọ bụ ezie na PBDE, ewezuga Deca-BDE, adịkwaghị n'ahịa US, a ka nwere ike ịhụ ha n'ihe ndị emepụtara tupu mmachibido iwu ahụ.
N'ihi na kemịkalụ PBDE anaghị adị mfe nbibi, ha nwere ike ịdịgide n'anụ ahụ mmadụ wee bufee nne na nwa ebu n'afọ na-etolite.
Deca-BDEs ka na-agbasa ebe niile, n'agbanyeghị na a na-ewepụ ha, a na-ahụkwa ya na plastik na-adịgide adịgide maka ngwa eletrọnịkị na ngwa ụlọ ọrụ, akwa akwa akwa, nkwado drapery, na pallets plastik.
"N'ihi na PBDE dị na ebe obibi na ụlọ ọrụ dịka ha dị na ngwá ụlọ ochie, ihe mkpuchi kapeeti, ụfụfụ na ngwá electronic, ọmụmụ ihe na-ebutekwu nchegbu banyere nsị ha na-eto eto na ụmụaka," ka Dr. Chen kwuru.
Gụọ nchịkọta ọmụmụ ihe ebe a.